Saado Cali Oo Xubintii Baarlamaanka Beesha Barkad Faroole Shashafo U Siiyey Iyadoo Boogihii Garoowe Kasoo Gaadhay Lagu Dhayayo, St. Cloud MN, USA – Codka, shacabka, SSC, wararkii ugu dambeeyey
Saado Cali Oo Xubintii Baarlamaanka Beesha Barkad Faroole Shashafo U Siiyey Iyadoo Boogihii Garoowe Kasoo Gaadhay Lagu Dhayayo, St. Cloud MN, USA
Home  Jaaliyadda ssc  Saado Cali Oo Xubintii Baarlamaanka Beesha Barkad Faroole Shashafo U Siiyey Iyadoo Boogihii Garoowe Kasoo Gaadhay Lagu Dhayayo, St. Cloud MN, USA
Jaaliyadda ssc Wararka August 21, 2012
1 46 9770
Allssc: Waxaa maanta kasoo yeedhay gudi kusheega farsamada u shaqeeya kooxda Faroole iyo Gaas, warar lagu sheegayo in lagu bixiyey qaar ka mid ah xubnihii baarlamaanka beesha dhulbahante oo lasiiyey dhuuniqaatayaal hoos jiifa Faroole. Waxaase intaa ugu darayd markii xubintii beesha Barkad lagu magacaabay fanaanada aan xuduuda lahayn ee Saado Cali Warsame oo hada shaadir rabaani ah ku xidhatay magaalada St. Clould, MN si ay ugu qariso dhaawacyadii kasoo gaadhay Garoowe. Faroole oo hurinaya iska hor keen beelaha dhulbahante isagoo adeegsanaya wax magarato ayaynu eegnaa waxay ka yeesho fanaaanda aan xadka lahayni. Beesha khaatumo iyo warbaahinta SSC ayay ku adagtahay inay Saado Cali waxbadan ka yiraahdaan, maadaama ay waxbadan horay u qabatey. Waxaadse moodaa in dulqaadka shacabaka Khaatumo soo yaraanayo. Waxaanuna wax ku qaadan doonaa waxay Saado kayeesho fidnadan bilaabatey horeyna ay wax uga aragtey lagagana aamusay.
Saado oo ka dhalatey beel ka mida beelaha ugu magac iyo maamuuska dheer beelaha dhulbahante una qalanta inay magaca Khaatumo ku hesho xubin Baarlamaan, ayaa Faroole rabaa inuu magaceeda shaqsiga ah u isticmaalo si beesha dhulbahante madaxa isula gasho cuqdadna loogu kala abruuro. Waayo habka Faroole wax ugu dhacayo Saado Cali waa hab aad u khilaafsan habka beesha Khaatumo wax u qaybsato oo uu si fiican u yaqaan Faroole(Fidnoole).
SNM baa dadkayga laysay oo dhacday bay ku haysaye, ma hadaan anigu intaan dhici karo dhacayaa oo Faroole la hoos gelyaa bay bilawday. Horaa loo yidhi “Bal aynu eegno uuraysataye waxay umuli doonto” mashaqadandan lagu magac iyo maamuus dilayao Saado Cali. Saado go’aanka ay ka qaadato dhagrtan beesha Khaatumo la dhexdhigayo waa mid aan hadhi doonin. Saado maanta baahi u gaynaysa ma ogin, magac inteedaa ku filan, waxay u aado Muqdisho oo tolkeed cadkooda cadow ugu hiilisana waa wax waqtigu qori doono mudo dhow. Gabadhii tirisay gabaygii lagaga difaacayey “Hinda SNM” wixii wanaag ahaa ee ay Saado Cali kasheegtay way ka ilmayn doontaa ama way ku farxi doontaa.
Fadlan taladiina halkan ugu soo gudbiya Saado Cali, idinka oo aan u gefayn Sans Frontiere Fanaana intaan fidnada Faroole(Fitnoole) jiidan.